मामाघरबाट सुनका गरगहनासहित नगद चोरी गरेको दुई युवासहित नाति पक्राउ - Hamro Janakpur
मामाघरबाट सुनका गरगहनासहित नगद चोरी गरेको दुई युवासहित नाति पक्राउ
२०७८ पुष २६, सोमबार १४:५० गते
जनकपुरधाम । मामाघरबाट पाँच तोला सुनका गरगहनासहित नगद चोरी गरेको आरोपमा दुई युवा पक्राउ परेका छन्।
जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ माथिल्लो भालुवाङका १८ वर्षीय बसन्त खत्री र २३ वर्षीय खेमराज चौधरी पक्राउ परेका छन्।
स्थानीय गंगादेवी क्षत्रीको घरबाट शनिबार मध्यराति पाँच तोला सुनका गरगहना र ३९ हजार नगद चोरी भएको थियो। क्षत्री बसन्तकी मावली हजुरआमा हुन्।
सूचना आधारमा प्रहरीले आइतबार आफन्ती सबै २२ जना जतिलाई सोधपुछका लागि बोलाएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टले सेतोपाटीलाई बताए।
सोधपुछका क्रममा बसन्त खत्रीको कुरा केही अस्पष्ट र शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले उनीमाथि आशंका गर्दै निगरानी गर्न सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरी निरीक्षक भट्टले बताए।
बसन्तका क्रियाकलपा थप शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले फेरि आइतबार बेलुका उनलाई प्रहरीमा बोलायो। खानतलास गर्ने क्रममा उनको साथबाट मोबाइलमा प्रयोग हुने आठ वटा सीम कार्ड फेला परे। त्यसमध्ये बसन्तले एउटा सिमकार्ड तत्कालै चपाएर भाँचिदिए।
त्यसपछि प्रहरीले मावली हजुरआमाको गरगहना र नगद कहाँ छ ? भनेर सोधेपछि उनीहरूले लुकाएको ठाउँको बारेमा बताएको प्रहरी निरीक्षक भट्टले जानकारी दिए।
‘बसन्तले ३९ हजार रुपैयाँ वडा कार्यालय पछाडिको झुपडीमा लुकाएको कुरा खोले र खेमराजले ५ तोलाका गरगहना रामजानकी मन्दिरको पछाडि खाल्डो खनेर गाडेको कुरा खोले,’ प्रहरी निरीक्षक भट्टले भने, ‘उनीहरूले भनेकै ठाउँमा लगेर जाँदा नगद र सुनका गरगहना फेला परे।’
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको भट्टले बताए।